ANDRY RAJOELINA TAO MAHATSIATRA AMBONY : Tsy ho tanàna maty intsony i Fianarantsoa, hiova tanteraka, ho tanàna mandroso – Free News
lundi, 18 octobre 2021 - 8:36
Mahazaka voafonja 1 800 ny fonja vaovao.
Accueil/Politika/ANDRY RAJOELINA TAO MAHATSIATRA AMBONY : Tsy ho tanàna maty intsony i Fianarantsoa, hiova tanteraka, ho tanàna mandroso
ANDRY RAJOELINA TAO MAHATSIATRA AMBONY : Tsy ho tanàna maty intsony i Fianarantsoa, hiova tanteraka, ho tanàna mandroso
Feno tanteraka ny fandaharam-potoanan’ny Filoham-pirenena tao anatin’ny roa andro, tao amin’ny Faritra Mahatsiatra Ambony. Fotodrafitrasa maro no notokanana. Tetikasa maro ihany koa no mbola hotanterahana, ka nilazan’ny Filoha fa hiova tanteraka i Fianarantsoa, ary tsy ho tanàna maty intsony, araka ny niheverana azy hatramin’izay, fa ho tanàna mandroso manomboka izao.
“Hiova tanteraka i Fianarantsoa, tsy ho tanàna maty intsony fa tanàna mandroso”, hoy Filoha Andry Rajoelina tamin’ny vahoakan’i Fianarantsoa nandritra ny fitsidihany ny toerana tao Ambatomena izay hanorenana sy hanatanterahana ny tetikasa “pôle urbain”. Ho hita ao amin’ity tetikasa ity ny lalan-dehibe na “Avenue” mahafinaritra, toeram-pivarotana isan-karazany, ary kianja “coliseum” izay velirano nataony tamin’ny mponin’i Fianarantsoa. Hisy toerana fitsangatsanganana toy ny zaridaina lehibe sy ny “esplanade”. Hapetraka eo ihany koa ny biraom-panjakana isan-tsokajiny sy izay rantsa-mangaikan’ny Minisitera rehetra.
Ankoatra izay, isan’ny nanamarika ny dian’ny Filoham-pirenena tao Fianarantsoa ihany koa ny fitokanana ny fonja manarapenitra vaovao (maison centrale) ao Volamena Kaominina Ambanivohitra Ambalakely. Nandritra ny fandraisam-pitenenany, nilaza ny Minisitry ny Fitsarana Imbiki Herilaza, tafiditra ao anaty politika ankapoben’ny Fanjakana ao anaty fanatrarana ny filaminana. Eo koa ny fanajana ny zo fototra maha olona. Nambarany fa ny fanatsarana ny tontolo famonjana dia tsy maintsy mandalo fanavaozana ny sehatry ny fonja sy ny fotodrafitrasa. Amin’izao fotoana, efa andala-pahavitana ny fonja ikelivondraka Distrika Ihosy. “Tokony ho hita taratra aminy asa ny fitondrantena mendrika sy fanajana zo maha olona”, hoy hatrany izy. Notsindriany koa fa tsy ny famenoana ny fonja no tanjona fa tokony hisy hatrany kosa ny fiarovana ny madinika sy ny fitsinjovana ireo voafonja.
Finiavana hitondra fanovana
Tetsy ankilany, nilaza ny Filoha fa manamarika ny finiavan’ny fanjakana hitondra fanovana manarapenitra izao fotodrafitrasa vaovao izao. « Efa ela no tsy nisy intsony fanaovana fonja kanefa feno tanteraka ny fonja ankehitriny. Manana zo hatrany ny olona na voafonja aza », hoy ny Filoha. Tsy tokony toerana fanasaziana ihany ny fonja fa fanarenana, hoy hatrany izy. Noho izany indrindra, araka izany, no itondrana fanavaozana eo amin’ny tontolon’ny fonja. Nandritra io fotoana io ihany koa no nanolorany fiara ho an’ny fonja ao an-toerana mba hitondrana ireo voafonja mivezivezy eny amin’ny Fitsarana. Ho an’ity fonja ity manokana, dia misy ny toerana fanaovana fiofanana ao an-toerana, misy koa toerana ho an’ny zaza tsy ampy taona, ho an’ny vehivavy manokana, ho an’ny lehilahy manokana. Ny fonja izay mahazaka voafonja hatrany amin’ny 1 800 isa.
Tsara ho fantatra fa ankoatra ny fitokanana ny fonja vaovao, nisy koa fitokanana EPP Manarapenitra tao Fianarantsoa, fizarana mari-pahavitana fiofanana ho an’ireo nisitraka ny tetikasa asa avotra, fitokanana Kianja manarapenitra ao Ambalavao, fitokanana ny toby DSS ao Ambalakindresy izay hanamafy ny asa fampandriana fahalemana.
RAVALOMANANA MARC: Manao ririnin-dasa tsy tsaroana, efa very tadidy angamba?
DELEGASIONA TARIHIN’NY FILOHA ANY PARIS: Mandresy lahatra ireo Mpandraharaha vahiny ho avy eto Madagasikara